Mabaadi'da Xulista Noocyada Kubadda Ball Valves Noocyada Dhismaha-Maqaallo Farsamo-Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (Titan waalka waa sumadeena)
Mabaadi'da Xulista Noocyada Dhismaha Ball Valves
Waqtiga: 2020-10-09 Hits: 84
Baalalka kubbadda ee ku saleysan dhismaha kubbadda waxay leeyihiin laba nooc: sabbadaha kubbadda oo dul sabeynaya iyo trunnion-ka lagu rakibay filtarka. Sababta oo ah labada nooc ee kubbaddoodu shaqeeyaan, kubbadaha sabbaynaya iyo trunnion kubbadaha la miiray. Intaa waxaa sii dheer labadan nooc ee dhismaha kubbadda, filtarka kubbadda ayaa sidoo kale leh noocyo kale oo kubbadeed ah sida nooca cirifka, nooca V-ga leh, nooca eccentric iyo nooca orbital (kubbadda qaadaysa tallaabada lulaysa), kuwaas oo ah noocyada lahaanshaha soo saarayaasha qaarkood.
Kubbadda dul sabaynaysa
Baalalka dul sabeynaya wuxuu leeyahay qaab dhismeed fudud oo waxaa lagu xiraa si xoog ah cadaadiska qufulka ee ka dhasha cadaadiska bamka. Walxaha baalal sabaynta ayaan ku habboonayn munaasabadaha leh dhuumaha waaweyn, ama waxay noqon doonaan kuwo aad u culus oo hawlgala ama xitaa lama dabooli karo haddii cadaadiska dhexdhexaadintu hooseeyo si loo riixo kubbadda si loo xiro. Xaaladaha caadiga ah awgood, isku darka qiimeynta cadaadiska iyo dhexroorka wiishka kubbadda dul sabbaynaya ayaa u qoran sida soo socota.
A. Class150: Ilaa DN300
B. Class300: Ilaa DN250
C. Fasalka 600: Ilaa DN150
Haddii jirka waalka kubbadda iyo kursiga waalka si habboon loogu qaabeeyey cabir ku habboon, waalka kubbadda dul sabbaynaya sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa xaaladda dhexroor weyn illaa DN300.
Wareegyada kubbadda dul sabayn kara waxay yeelan karaan midkood hal qaab oo naqshadaysan ama mid laba-gees ah naqshadda kursiga oo ku xidhan ujeeddada dalabka. Faa'iidada hal jihada loo xiray shaashadda kubbadda gaashaanku waa in cadaadiska ku jira daloolka waalka si otomaatig ah loo nafisi karo.
Isku-darka kore ee qiimeynta cadaadiska iyo dhexroorka wiishka kubbadda dul sabeynaya ma aha doorashada caadiga ah ee dhammaan soo saareyaasha waalka. Marka loo baahdo in la qaato noocyada kale ee kubbadda, waa in lagu muujiyaa xaashida xogta waalka.
Trunnion ayaa lagu dhejiyay Ball
Trunnion-ka lagu rakibay waalka kubbadda cagta waxaa lagu xiraa iyada oo loo marayo cadaadiska xirashada ee ka dhasha asaasiga waalka iyo kursiga waalka sabeeya ee ay taageerayaan guga. Ka kooban kursiga waalka, giraanta wax lagu xiro, guga taageeraya, iwm., Kursiga waalka sabbaynaya wuxuu leeyahay qaab dhismeed adag iyo cabir ballaaran. Si kastaba ha noqotee, waalka kubbadda trunnion wuxuu leeyahay sarreyn muuqata oo ah in la xiri karo iyada oo aan la saarin cadaadiska dhexdhexaadinta, oo wuxuu yeelan karaa waxqabadka kalsoonida lagu kalsoonaan karo. Waxay sidoo kale noqon kartaa mid si fudud laba-dhinac loo xidho. Kuwani dhammaantood waxay ka dhigaan kuwo si joogto ah loogu isticmaalo xaaladaha dhexroor ballaaran.
Haddii aysan jirin shuruudo gaar ah oo ku saabsan filtarka kubbadda trunnion, iskama yareyn karaan cadaadiska godadka kaligood. Sidaa darteed, marka ay jiraan shuruudo gaar ah, waa in lagu muujiyaa xaashida xogta waalka.
Xiga: Ball Baalayaasha sabayn iyo Nidaamka Tijaabada Cadaadiska Cadaadiska Cadaadiska ee Trunnion